Bogga ugu weyn 21ka Shabakadood ee Maareynta Lacagta ee ugu sarreeya 2021 -ka
Bixinta biilasha, soo saarista kaydka, ururinta lacagta, iyo ku raaxaysiga hawlgabka muddada dheer oo wanaagsan dhammaan waxay u baahan yihiin in la ogaado sida loo maareeyo dhaqaalahaaga shaqsiyeed sida khabiir.
In kasta oo bangiyada iyo la -taliyayaasha maaliyadeed ay macaamiisha ka qaadi karaan boqolaal ama kumanaan doollar hagidda maaliyadeed ee shaqsiyeed, Internetku wuxuu siiyaa ilo badan oo lacag la'aan ah kuwa raadinaya inay hagaajiyaan aqoontooda maaliyadeed iyagoon bangiga jabin.
Hoos waxaa ku yaal 21 Shabakadaha Maareynta Lacagta ugu sarreeya oo faa'iido leh oo bixiya ilo iyo macluumaad kaa caawiya inaad gaarto hadafyo kala duwan, oo u dhexeeya inaad ku noolaato si qumman ilaa qaadashada alaabada deynta ee saxda ah iyo inaad si macquul ah u maalgeliso.
Sida laga soo xigtay Investopedia, Maaraynta lacagtu waxay ka shaqaysaa hababka miisaaniyadda, kaydinta, maalgelinta, kharashgaraynta, ama haddii kale kormeerida adeegsiga raasamaalka ee shaqsi ama koox. Waxa kale oo lagu tilmaami karaa maareynta maalgashiga iyo maaraynta faylalka.
Si kale haddii loo dhigo, waxaa loola jeedaa sida aad u maamusho dhammaan qaybaha dhaqaalahaaga, laga bilaabo abuurista miisaaniyad illaa go'aaminta halka jeeg kasta uu tago si loo qeexo yoolalka muddada-dheer iyo xulashada maal-gashiga kaa caawiya inaad gaarto yoolalkaas.
Si aad u faahfaahsan, maareynta lacagtu waxay ku lug leedahay ma aha oo kaliya inaad ku dhahdo “maya” dhammaan iibsiyada laakiin waxay kaloo abuureysaa istiraatiijiyad kuu oggolaaneysa inaad ku dhahdo “haa” waxyaabaha adiga kuugu muhiimsan.
Runtu waxay tahay, haddii aadan aqoon sida loo maareeyo lacagtaada, qaddar lacag ah ayaa ku filnaan karta.
Raadinta goob maareyn lacageed oo si firfircoon kaaga caawin doonta aqoonsiga fursadaha kaydka ee kharashaadkaaga maalinlaha ah? PocketGuard waxaa laga yaabaa inay tahay waxa aad raadineyso.
Markaad isku xirto akoonnadaada, PocketGuard wuxuu la socon doonaa kharashaadkaaga wuxuuna kaa caawin doonaa falanqaynta. Intaa ka dib, waxaad u adeegsan kartaa macluumaadka si ay kaaga caawiso sameynta miisaaniyad ka wanaagsan.
PocketGuard sidoo kale waxay ogaataa kharashyada soo noqnoqda iyo raadinta dalabyo ka fiican. Waxaad falanqayn kartaa biilasha gaarka ah, waxaad ogaan kartaa isbeddellada kharashaadka bil ilaa bil, waxaadna u adeegsan kartaa abka si aad lacag u keydiso mustaqbalka fog.
Ku biir PocketGuard
Miyey tahay ogaanshaha waxa aad bixin doonto mustaqbalka dantaada ugu weyn ee miisaaniyadda? Waxaa laga yaabaa inaad ka labalabeyso inaad qado ku qaadato $ 10 sababtoo ah ma xasuusan kartid marka deynta ardaygaagu ay tahay, xitaa haddii koontada bangigaagu aad u caafimaad qabto. Dollarbird ayaa kaa caawin karta tan.
Iyada oo lagu darayo lacag-bixinno qaali ah, Dollarbird gabi ahaanba waa bilaash. Hadafku waa inaad miisaaniyaddaada u rogto jadwal.
Waxaad ku arki kartaa dhammaan biilashaada soo socda jaleec. Ku-macaamilidda midabka-midab-kala-qaybinta oo geli macaamil soo noqnoqda, sida jeeggaaga mushaharka iyo biilka korontada, si dhakhso ah oo fudud.
Waxaad ku arki kartaa dheelitirkaaga la saadaaliyay appka, si aad u ogaato inta lacag ah ee aad ku badbaadin karto si badbaado leh.
Si kastaba ha ahaatee, Dollarbird kuma biirto xisaabaadkaaga bangiga, taas oo ah cillad. Waa inaad gacanta ku gashaa macaamil ganacsi, laakiin taasi ma aha wax adag-waxayna ku siinaysaa hab aad gacmahaaga ugu qabato lacagtaada.
Ku biir Dollarbird
Wally waa barnaamij miisaaniyad fudud oo aan lahayn dawanno iyo fooryo badan. Sifooyinka gaarka ah ee ay leedahay, in kastoo, ay mudan yihiin in la barto.
Marka hore, Wally waxay aqbashaa ficil ahaan dhammaan lacagaha qalaad. Wally waxay kuu noqon kartaa faa iido weyn haddii aad tahay reer guuraa dhijitaal ah oo waqti ku qaata dalka dibaddiisa.
Marka xigta, Wally waxay kuu oggolaaneysaa inaad keydiso sawirrada rasiidhada si aad ula socoto canshuuraha muhiimka ah iyo alaabada ganacsiga adigoon warqad la macaamilin.
Ku biir Wally
Spendee weli waa app kale oo muuqaal ah oo la jaan qaada xisaabaadkaaga bangiga. Si otomaatig ah ayey u soo dejisaa macaamillada waxayna u kala saartaa. Waxay kaloo kuu saamaxaysaa inaad la wadaagto qaar ka mid ah miisaaniyadaada kuwa kale.
Spendee ayaa kugu hayn doonta waddada haddii aad lacag u qoondeyso boorsooyinka dalwaddii. Waxa kale oo aad la wadaagi kartaa boorsooyinka qaarkood saaxiibbada si ay kaaga caawiyaan in aad la xisaabtantid marka aad ka shaqaynayso ujeeddooyinkaaga.
Khasab kuguma aha inaad soo bandhigto miisaaniyaddaada oo dhammaystiran, taas oo waxtar leh haddii aad rabto inaad maaliyaddaada ka dhigto mid gaar ah.
Markaad u safreyso dibadda, Spendee wuxuu kaloo leeyahay qaab socdaal oo taageera lacago badan.
Ku biir Spendee
Akhri Sidoo kale: 20 Shaqooyin Oo Lacag Badan Keeni Kara 2021
Kani waa mid ka mid ah mareegaha maareynta lacagta ee ugu caansan dumarka doonaya inay mas'uul ka noqdaan dhaqaalahooda. Waxaa si weyn loogu tixgeliyaa inay tahay kheyraadka ugu wanaagsan haweenka doonaya inay "war helaan, is abaabulaan, oo ay helaan taageero."
Waxaad qaadan kartaa Bootcamp maaliyadeed shaqsiyeed waxaadna ku abuuri kartaa miisaaniyad madalkan. Haweenka aqoonta dhaqaale u leh waxay heli karaan talo khabiir oo ku saabsan canshuuraha iyo maalgashiga, halka kuwa deynta ku jira ay baran karaan sida looga baxo deynta.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa maqaallo madadaalo leh dhacdooyinka maaliyadeed ee hadda jira, talooyinka lacag-kaydinta, iyo talo ku saabsan xisaabaadka ugu fiican iyo kaararka deynta.
Ku biir LearnVest
Waxaa jira barnaamijyo miisaaniyadeed oo aad u fara badan, laakiin midkoodna ma aha mid dhammaystiran ama adeegsada sida Mint.
Waxaad abuuri kartaa miisaaniyad leh daraasiin qaybood ka dibna isku waafajin xisaabaadkaaga bangiga si aad si toos ah ula socotid kharashaadkaaga qayb kasta. Waxaad sidoo kale heli doontaa ogeysiisyada iimaylka marka aad dukaamaysiga aadday.
Waxa kale oo aad ku xiriirin kartaa amaahdaada, kaarka deynta, iyo xisaabaadka maalgashiga goobta si aad u hesho sawir dhab ah oo ku saabsan socodka lacagta caddaanka ah, keydinta, iyo deynta, iyo sidoo kale raadraaca horumarka xagga ujeeddooyinka maaliyadeed sida bixinta deynta amaahda ardayga ama keydinta safarka Thailand. Xitaa waxaad heli kartaa macluumaad intaad guureyso.
Ku biir Mint
Akhri Sidoo kale: Sida Lacag Loogu Kaydiyo Starbucks: 15 Siyaabood Oo Lagu Helo Cabitaannada Starbucks Jaban
Ma jeclaan lahayd inaad hesho warar dhaqaale iyo majalado? DailyWorth waa dariiqa loo maro. Kani waa mid ka mid ah mareegaha maareynta lacagta ugu fiican, oo ay ku jiraan warar maaliyadeed iyo talo ku saabsan sida loo maareeyo dhaqaalahaaga.
Wargeysyada maalinlaha ah ee ka soo baxa goobtan waxaa ka mid ah talooyin maaliyadeed oo wax ku ool ah iyo macluumaad si haweenka looga caawiyo miisaaniyadda, kasbashada, kaydinta, maalgashiga, iyo si caqli gal ah u kharash gareeya.
Waxaad baran doontaa dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato sida lacag badan looga sameeyo koontadaada bangiga, sida loo dukaameysto adigoon qarash gareyn, iyo aasaaska maaliyadda.
Goobtan maareynta lacagta ayaa sidoo kale bixisa warsidaha elektaroonigga ah oo leh maalgashi, wax soo saar, hawlgab, iyo talooyin kale.
Ku biir DailyWorth
Ma garanaysid meesha laga bilaabo marka ay timaado qaadashada kaarka deynta cusub? Waan ogahay - waa wax aad u badan. NerdWallet ayaa u soo gurmata.
NerdWallet waxay baari doontaa kumanaan kaarar si ay kuu hesho midka kuugu fiican, haddii aad rabto mayl diyaaradeed, qiime jaban, lacag -celin, ama dulsaar yar oo ku saabsan wareejinta dheelitirkaaga.
Waxaad yareyn kartaa xulashooyinkaaga ku saleysan inta aad qarashgareyso, inta aad diyaar u tahay inaad ku bixiso khidmadaha sanadlaha ah, iyo dhibcaha dhibcahaaga.
Marka lagu daro liisaska kaararka, khubarada goobtu waxay soo jeediyaan fikradooda ku saabsan in barnaamijyada iyo abaalmarintu run ahaantii qiimo leeyihiin.
Ku biir NerdWallet
ClearCheckbook waa mid ka mid ah mareegaha maareynta lacagta ee ugu sarreeya oo kaa caawin kara inaad siiso xisaabinta lacagtaada ugu badan.
Waa buug-xisaabeedka jeeg-ku-saleysan webka oo aad u sarreeya. Waxaad u adeegsan kartaa isku -xirka khadka tooska ah ama iPhone -kaaga, Android, ama Palm si aad ula socoto kharashaadkaaga, geliso kharashyada maalinlaha ah, oo aad u abuurto miisaaniyad xaddidan kharashaadka.
Si kastaba ha noqotee, waxaad heleysaa aaladda warbixinta caadada ah, beeraha macaamilka caadooyinka, saadaalinta dheelitirka mustaqbalka, iyo wax ka beddelka astaamaha soo-jeedinta otomaatiga ah marka aad u cusbooneysiiso koontada qaaliga ah.
In kasta oo madalkani leeyahay nooc bilaash ah, haddana waxaa jira nooc qaali ah oo qiimihiisu yahay $ 4 bishii. Noocan qaaliga ah, waxaad ka heli kartaa xulashooyin badan.
Ku biir ClearCheckbook
Mvelopes-ku waa aalad maaliyadeed oo ku salaysan shabakad awood leh oo ku salaysan fikrad dhaqameedka miisaaniyadda bakhshadda, taas oo qayb kasta oo miisaaniyadeed loo qoondeeyay baqshad ay ku jirto qaddar lacag ah.
Si kastaba ha ahaatee, maxaa yeelay waxay diiradda saareysaa istiraatiijiyad miisaaniyadeed oo hore micnaheedu ma aha inaad isticmaasho aalado duugoobay.
Mvelopes -ku waxay si toos ah uga soo jiidaan xogta macaamilka boqolaal ka mid ah hay'adaha maaliyadeed, waxay taageeraan bixinta biilka otomaatiga ah, waxayna kaa caawineysaa inaad dhisto sawirro qiimo leh oo saafiga ah marka miisaaniyaddaada iyo yoolalkaagu is -beddelaan.
Mvelopes-ku waa mid u gaar ah inuu noqdo tartamayaasha Hive oo keliya oo aan lahayn ikhtiyaar koonto oo bilaash ah, laga yaabee bayaan ku saabsan sida adeegsadayaashu ugu qanacsan yihiin adeegga ay ka dhigtay shanta ugu sarreysa in kasta oo aysan jirin ikhtiyaar xisaabeed biir lacag la'aan ah.
Ku biir Mvelopes
Akhri Sidoo kale: Sida Loogu Maal Gashado Nike Stock Lacag Yar | 2021 Hagaha buuxa
Miyaad jeceshahay inaad haysato kaaliye maaliyadeed oo shaqsi ah oo kaa caawiya sidii aad u maamuli lahayd lacagtaada? Waxaad u badan tahay inaad raadineyso Albert.
Waxaad heli kartaa macluumaad shaqsiyeed oo ku saabsan xooggaaga maaliyadeed ee hadda jira- waxaad samaynayso si aad u wanaajiso – adoo isku daraya sirdoonka macmalka ah iyo gargaarka aadanaha.
Iyada oo ku saleysan dakhligaaga, qaababka kharashaadka, iyo biilasha, Albert wuxuu kuu dejinayaa miisaaniyad si otomaatig ah.
Intaas kaliya ma aha, laakiin Albert wuxuu kaloo kaa caawinayaa inaad lacag dhigto koontada keydka, wuxuu falanqeeyaa biilashaada si uu u kashifo lacag -bixinnada dheeraadka ah, oo xitaa wuxuu ku ogeysiinayaa marka tijaabada xorta ah ay dhici doonto.
Waxaad u isticmaali kartaa Albert bilaash, laakiin lacag yar, waxaad u qori kartaa khubaro dhab ah si ay kaaga caawiyaan hadafyada sida maalgelinta badan iyo bixinta deynta.
Ku biir Albert
Mid ka mid ah bogagga ugu faa'iidada badan uguna xog -ogaalsan liiskayaga goobaha maareynta lacagta ugu sarreysa waa BankingSense.
Boggaan maareynta lacagta wuxuu bixiyaa hab gaar ah oo lagu soo bandhigayo macluumaad maaliyadeed oo waxtar leh, fikrado, iyo hagitaan iyadoo aan loo adeegsan luuqad farsamo ama eraybixin ay adag tahay in la fahmo.
Kaararka amaahda, caymiska, maaliyadda ganacsiga yar yar, maaliyadda shaqsiga, canshuuraha, iyo arrimo kale ayaa lagu daboolay goobta.
Dhinacyada bulshada ee Dareenka Bangiga ayaa ka mid ah waxyaabaha ka dhigaya kuwo aad waxtar u leh.
Ku biir BankingSense
#13. Lacagta CashMoney
CashMoneyLife waa mareegaha maareynta maaliyadeed ee ku xiga liiskayaga.
Marka la eego shaqeynta, goobtan maareynta maaliyadda, oo la mid ah Wall Street Journal, The New York Times, Yahoo! Maaliyadda, iyo Lacagta MSN, waxay u taagan yihiin ilaha lagu kalsoon yahay ee maaliyadda shaqsiga ah iyo kaalmada shirkadda yar.
Waxay u badan tahay in lagu dhejiyo qaab blog joogto ah iyada oo aan la helin gambaleellada iyo fooridaha ka dhigaya blogyada kale mid aad u adag, sidaa darteed akhristayaasha ayaa halkan u imaan kara jawaabo toos ah.
Boggan wuxuu leeyahay qayb xiise leh oo la yiraahdo "Lacag Bilaash ah," oo ka kooban macluumaad ku saabsan gunnooyinka gudbinta, tijaabooyinka bilaashka ah, iyo dalabyada kale ee la midka ah.
Ku biir CashMoneyLife
Bankrate waa mid ka mid ah goobaha ugu xog-ogaalka iyo ixtiraamka badan liiskan. Wargeyskan duugga ah, oo bilaabmay xilligii intarneetka ka hor 1976, wuxuu u xuubsiibtay mid ka mid ah mareegaha sida aadka ah looga tixgeliyo warshadaha maaliyadda shaqsiga.
Bankrate ma aha oo kaliya inuu bixiyo macluumaad ku saabsan sicirka bangiga, amaahda guryaha, iyo kaararka deynta, laakiin wuxuu kaloo bixiyaa talo maaliyadeed shaqsiyeed oo ku saabsan mowduucyada sida qorsheynta maaliyadeed, hawlgabka, iyo maalgelinta.
Ku biir Bankrate
MyMoney.gov waa degel maareyn lacageed oo federaal ah oo bixiya la -talin maaliyadeed iyo fikradaha maareynta lacagta.
Waxay asal ahaan kuu sheegaysaa sida lacag loo sameeyo, lacag loo amaahdo, lacag loo kaydsado, lacag loo gashado, lacag loo isticmaalo, loona ilaaliyo lacagtaada.
Intaa ka sokow, goobtu waxay ka kooban tahay bogag kale oo xiiso leh oo aan caadi ahayn, sida aaladaha maaliyadeed iyo su'aalaha lacagta.
Ku biir MyMoney.gov
Fiiri Madasha Kaarka Amaahda haddii aad xiisaynayso isku -xidhnaanta shaqsiyeed iyo bulshooyinka internetka. Waxaa loogu talagalay “kuwa jecel sumcadda,” sida laga soo xigtay New York Times.
Boodhadhkeedu waa macdan dahab ah oo ku saabsan sida loo helo kaararka. ” Sidaad filan karto, macluumaadka maaliyadeed ee shaqsiyeed ee halkan lagu bixiyay waxay xoogga saaraan bixinta kaarka deynta iyo sida ugu habboon ee loo adeegsan karo.
Ku biir CreditCardForum
Wuxuu u baahan yahay goob maareyn maaliyadeed oo kaa caawin karta maareynta lacagtaada laakiin wuxuu ka baqayaa inuu isku xiro xisaabaadkaaga maaliyadeed? Shimbir waa adiga!
Birdy waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee maareynta lacagta bilaashka ah halkaas oo aad ka heli karto aaladaha miisaaniyadda adiga oo aan ku xirin xisaabaadkaaga maaliyadeed.
Maalin kasta, aaladdu waxay kuu soo diri doontaa emayl ku weydiinaya waxaad soo iibsatay, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad ku jawaabto sharraxaad ku saabsan iibsiyadaada iyo summadahaaga ($ 55 #dhar #shaqo, $ 3.50 #qaxwo) si loogu qoro koontadaada.
Kadib, wakhti kasta, gal si aad u eegto jaantusyada caadooyinkaaga kharash -garaynta iyo isbeddellada iyo sidoo kale la socoshada kharashyada toddobaadlaha ah iyo billaha ah.
Ku biir Birdy
#18. Roller Cajiib
Dough Roller waa mareegaha maareynta maaliyadeed ee xiga ee ku jira liiskayaga. Boggaan maareynta lacagta wuxuu ku siinayaa qalab, talo, iyo talooyin ku saabsan sida loo abuuro, loo tabaruco, loo keydiyo, loona isticmaalo lacag si xikmad leh.
Dadka si joogto ah u booqda Roller Roller waa kuwo aad u go'ay maxaa yeelay waxay ku raaxaystaan ​​mawduucyada kala duwan ee la daboolay.
Iskusoo wada duuboo, Dough Roller wuxuu qof walba wax u siiyaa, haddii aad jeceshahay baloogyada, baloogyada, wargeysyada, ama wax kasta oo u dhexeeya.
Ku biir DoughRoller
MyMoneyCircles sidoo kale waa mareeg kale oo maareynta lacagta onlaynka ah oo kaa caawineysa inaad maareyso maaliyaddaada shaqsiyeed.
Boggaan maaliyadeed ee shaqsiyeed, waxaad si bilaash ah uga qaybgeli kartaa “boot camp” oo u dhigma yoolalkaaga maaliyadeed.
Moreso, waxaad ka heli kartaa tilmaamo guul leh sida loo helo siyaabo lagu keydiyo, maareynta kaararka deynta iyo deynta, ilaalinta hantidaada, iyo kaydinta intaa ka badan.
Iskusoo wada duuboo, mareegaha lacagtani wuxuu kuu oggolaan doonaa inaad si xor ah u hesho tababarayaashooda gaarka ah kuwaas oo ah kabtanno iyo khubaro dhanka maaliyadda ah oo iyaga la shaqeeya.
Ku biir MyMoneyCircles
Yodlee wuxuu ku bixiyaa adeegyo maareyn lacageed oo aad u ballaaran onleenka. Waxaad la socon kartaa dhammaan xisaabaadkaaga iyo maalgelintaada.
Waxa kale oo aad abuuri kartaa miisaaniyad, la socoshada kharashaadka iyo dabagalka qiimaha hantida maguurtada ah. Waxaa intaa dheer, waxaad ku wareejin kartaa lacagaha iyo biilasha goobta.
Ku biir Yodlee
Goobta SmartyPig waxaa ugu horeyn loogu tala galay in lagu keydiyo lacag. Waxaad samayn kartaa akoonno kayd oo kala duwan, waxaad dejisan kartaa yoolalkaaga kaydinta oo aad la socon kartaa horumarkaaga goobta.
Waxaa si gaar ah qiimo u leh haddii aad damacsan tahay inaad ku iibsato shay kaydkaaga sababtoo ah waxaad u furaysaa kaydkaaga kaararka hadiyadda iyo qiimo dhimista.
Ku biir SmartPig
Sida Loogu Maal Gashado Nike Stock Lacag Yar | 2021 Hagaha buuxa
Haddii aadan joojin karin Diiwaangelinta otomaatiga ah ee Siriusxm 2 daqiiqo gudahood, Hel Caawimo Hadda!
Sahan dhowaan la sameeyay, waxaa la ogaaday in 84% dadka Mareykanka ay dhab ahaantii dhayalsadaan waxa ay ku bixiyaan dijitaalka…
Qaar ka mid ah su'aalaha ay tahay in qof kasta oo doonaya inuu maareeyo lacagtiisa/keeda uu weydiiyo, "Sideen u sameeyaa...